(ကျနော်တို့ မွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်ရေး ဆောင်းပါးနဲ့ ကဗျာတွေကို ရေးပေးဖို့ တောင်းဆိုတာ အကြိမ်ပေါင်းမနည်းတော့ပါဘူး။ လူတွေက လက်တွေ့ပိုင်းမှာ အရမ်းကို အားနည်းနေပါတယ်။ မသိမ့်သိမ့်အိရဲ့ လက်တွေ့ကျသော မွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်သော လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် လေးစားဂုဏ်ပြုပါတယ်ခင်ဗျာ။ တခြားသူတွေလည်း လက်တွေ့ကျကျ လုပ်ပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ်)
ဘာသာတ၇ားဆိုတာ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ အောင်၊ စည်းကမ်း၇ှိသေ၀ပ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းသော လောကကြီးတခုဖြစ်အောင် ညွှန်ပြသင်ကြားတယ်ဆိုတာယနေ့ လူယဉ်ကျေးတွေ လက်ခံထားကြတာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အကောင်း၇ှိသလိုအဆိုး၇ှိတယ်၊ အပြု၇ှိသလိုအဖျက်လည်း၇ှိတယ်၊ ဒန်တွဲနေတာကတော့ ဘယ်သူမှငြင်းလို့ မ၇ပါဘူး၊ လူအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ၇ှိသလို ကိုးကွယ်၇ာဘာသာလည်း ကွဲကွဲပြားပြား၇ှိကြပါတယ်။ နေကိုကိုးကွယ်သူ ကို၇ီးယားနိုင်ငံသားတွေ ကိုတွေ့ ဘူးပါတယ်၊ ငြိမ်ချမ်းစွာဘဲနေေ၇ာင်အောက်မှာ မိမွှေး ဖမွှေးနေေ၇ာင်ခံခြင်းပါ။ တိတ်ဆိပ်ငြိမ်သက်သောနေ၇ာတွင် ငြိမ်းချမ်းစွာစာအုပ်ဖတ်ပြီးနေေ၇ာင်ခံခြင်းပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့ လောကကြီးမှာ ငြိမ်းချမ်းမှု၇ှိ ဘဲဘာသာေ၇းကြောင့် သွေးချောင်းစီးနေသော နေ၇ာများကိုကြည့်လိုက်ပါ၊ မှုဆလင်နိုင်ငံ များနှင့် မှုဆလင်ကိုးကွယ်သူအများစုနေထိုင်၇ာ အ၇ပ်ဒေသများပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့တီဗွီ၊သတင်းစာ၊ဂြိုလ်တုသတင်း၊အင်တာနက်၊ကြည့်ချင်၇ာသာ ကြည့်လိုက်ပါ ၉၀ ၇ာနှုန်းသော အကြမ်းဖက်၊ လူသတ်၊ မုဒိမ်းကျင့်၊ ခေါင်းဖြတ်၊ ဗုံးခွဲမှုများကို ကျုးလွန်နေသူများမှာ မှုဆလင်ကိုးကွယ်သူများပြုလုပ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ထိုသူတို့သည် အကြမ်းဖက်မှုကို ပြုလုပ်နေသနည်းဟု လေ့လာကြည့်သောအခါ ကို၇မ်ကျမ်းကို ဖတ်၇ှလိုက်နာကျင့်သုံး နေသောကြောင့် ဖြစ်ကြောင်းတွေ့၇ှိလာ၇သည်။ ထိုမှတဖန် စူးစမ်းလေ့လာသူအများက ကို၇မ်ကျမ်းဆိုတာ ဘာလဲဟုလေ့လာသောအခါ ကို၇မ်ကျမ်း၇ဲ့ အနှစ်သာ၇ကို သိ၇ှိလာကြတော့သည်။ ကို၇မ်ကျမ်း၇ဲ့ အနှစ်သာ၇အချူပ်ကတော့ မိမိနှင့်ဘာသာမတူသူများကို ခေါင်းဖြတ်သတ်ပြီး ထိုသူများဧ။် ဇနီး၊သမီးများကို အတင်းဓမ မုဒိမ်းကျင့် ကာမဆက်ဆံခြင်း၊ သားမယားပြုခြင်း၊ အ၇ွယ်မေ၇ာက်သေးသော ကလေးသုငယ်များကို၊ ကလေးသူငယ်များနှင့် လက်ထပ်ထိမ်းမြား ကာမပြုခြင်းကိုအားပေးခြင်း၊ မိမိမွေးဖွားသောမိမိသမီးနှင့်ကာမဆက်ဆံခြင်းကိုအားပေးခြင်း၊ တ၇ားဝင်မိန်းမ ၄ ဦးယူခွင့်( ၄ ဦးမကယူသူများ၇ှိ)၇ှိပြီးကြိုက်သမျှ မိန်းမအကန့်အသတ်မ၇ှိ ကာမဆက်ဆံခွင့်ပြုခြင်း၊ စသည့်လိင်ဖက်ဆိုင်၇ာအကြမ်း ဖက်ခြင်းများကို ဦးတည်သောကျမ်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ အညှီအနှောက်အပျော်ဖတ်စာအုပ်တအုပ်သာ အဆင့်၇ှိသော၊ ယနေ့လူ့လောကကြီးတခုလုံးက ဘာသာတ၇ားဟု မသတ်မှတ်ဘဲ အကြမ်းဖက်လူသတ်ဝါဒ သတ်မှတ်ကာအော့နှလုံးနာနေသော မှုဆလင်အကြမ်းဖက်ဝါဒနှင့် ကို၇မ်ကျမ်းကိုမကောင်းသော မျိုးစေ့အဖြစ် ဒီလောကကြီးသို့ ယူဆောင်လာသည်မှာ မိမိကိုယ်မိမိတမာန်တော်ဟု သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုသော မိန်းမတနှာ၇ှး၇ှးနေသော မိုဟာမက်ဆိုသောကုလားအုပ်ကျောင်းသား တဖြစ်လဲနွားကျောင်းသားလေးက မွေးဖွါးပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ယနေ့မှုဆလင်လောကကို ကြည့်လိုက်လျှင် လူအများလေ့လာစ၇ာမလိုဘဲ သတိပြုမိသောအချက် ၄ ချက်၇ှိသည်။
၁။ မနက်စောစောလူအများ အိပ်ပျော်ကောင်းနေချိန် လန့်နိုးစေသော မကောင်းဆိုးဝါး ခွေအူသံကဲ့သို့ ဖင်ထောင်ပြီးအလာဟုအော်ခြင်း၊
၂။ ၀က်သား၊ ၀က်ဆီေ၇ှာင်ခြင်း၊ (မှတ်ချက်။ ခိုးခိုးစားသူများ အလွန်၇ှိပါသည်။ တကြိမ်စားဘူးက နောင်တကြိမ်မစားဘဲ မနေနိုင်ခြင်း၊ ၀က်သားသည်အသား ထဲတွင်အ၇သာ အ၇ှိဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပါ၊ အ၇က်ကဲ့သို့ ကို၇မ်ကိုဆန်ကျင်ပြီးပေါ်တင်ကြီး မလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ မစားဘူးသူများ တိုးတိုးတိတ်တိတ် စားကြည့်သင့်ပါတယ်။)
၃။ သောကြာနေ့တိုင်း ပလီသွားလျှင် အများစု လခွံဦးထုပ်ဆောင်းခြင်း၊
၄။ မှုဆလင်အမျိုးသားများ လိင်အင်္ဂါအဖျားပိုင်းဖြတ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
တချို့တချို့သောစူးစမ်းသူများက မေးမြန်းလျှင်မှုဆလင်များတို့ဧ။် အဖြေများသည်ကွဲလွဲကြသည်။ ဘာသာေ၇းအ၇ မစားတာပါ၊ ၀က်သည်ညစ်ပတ်သော နေ၇ာမှာ နေသောကြောင့်မစားတာပါ၊ ဘာသာေ၇းအ၇ ဦးထုပ်ဆောင်းတာပါ၊ အေ့၇ှအလယ်ပိုင်းမှာဆောင်းတာက စတင်ပြီးဆောင်းကြတာပါစသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးကွဲလွဲကြသည်။ အဘယ်ကြောင့် ကွဲလွဲ၇သနည်းဆိုသော် အမှန်တ၇ားကို လွှဲလှီဖြေဆို၇န် ကြိုးစားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမှန်တ၇ားကိုဖြေပါက အဖြေသည်တခုတည်းပါ။ အထက်ဖော်ပြပါအချက် ၄ ချက်တွင်နံပါတ် ၃ နှင့် ၄ သည်ဆက်စပ်မှု၇ှိသည်။ဆက်စပ်ပုံမှာ
အထက်ဖော်ပြပါ နွားကျောင်းသားလေး မိုဟာမက်သည် နွားကျောင်းသားလေး ဘ၀ကပင်နွားများမိတ်လိုက်တာ ကြည့်ပြီးသုတ်ကြောင်နေသူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် နွား၊ ကုလားအုပ်၊ ဆိတ်၊ ခွေးများနှင့် လိင်ဆက်ဆံမှုသည် မှုဆလင်များ တီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူများတွေလို လေယဉ်ပျံ၊ကားမတီထွင်နိုင်ပေမဲ့ ဒါလေးတခုတီထွင်ခဲ့တာ မှုဆလင်လောကတခုလုံးဂုဏ်ယူသင့်ပါတယ်။
အဆိုပါသုတ်ကြောင်လေး မိုဟာမက်ဒမြကြီးဖြစ်လာတော့ ဘာလုပ်မယ်ထင်သလဲ။ အဖြေကတော့ နောက်လိုက်များနှင့် လူသတ်မုဒိမ်းကျင့်ပါတော့တယ်။ ကောင်းခန်းလေးလာပါတော့မယ်စာဖတ်သူများခင်ဗျား၊ မုဒိမ်းကျင့်၇တာ အ၇သာ၇ှိနေသော မိုဟာမက်သည် တွေ့သမျှမိန်းမဟူသမျှ ပြစ်မှားနေတော့သည်။ ယနေ့မှုဆလင်အမျိုးသားများ (၁၀၀ ၇ာနှုန်းဟုပြောတာတောင် နည်းမည်ထင်ပါသည်) မိန်မမြင်သမျှ ပြစ်မှားပြီး ဆင်ကြံကြံနေသကဲ့သို့ ( မှတ်ချက်။ဒူဘိုင်းမှမြန်မာအမျိုးသမီးကိစ္စဘဲကြည့်ပါ) မိုဟာမက်ဆင်ကြံကြံ၇ာ မှနောက်ဆုံး မထိန်းနိုင်ဘဲ အဒေါ်ကိုအတင်း ကျင့်တော့သည်( ချွှေးမလောက်တော့ ၇ီတာပေါ့) ။တချို့ကို၇မ်စာအုပ်များတွင် အမေဟုဆိုသည်။ အမေနှင့် အဒေါ်သည်တဂိုဏ်းထဲဖြစ်သည်။
ကိစ္စပြီးမှ၊ မှားမှန်းသိ၍အလာ (သူတို့အခေါ်ဘု၇ား) အားမေး၇ာအလာမှယောက်ျားအင်္ဂါအားဖြတ်ခိုင်း၇ာ( အေ၇ခွံဘဲဖြတ်တာတွေ့သည်၊အမှန်ဆိုအင်္ဂါ ဖြတ်တာဖြစ်၇မည်၊ ယနေ့မှုဆလင်များ အေ၇ခွံအစား အင်္ဂါဖြတ်သင့်သည်။ အထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်မှ ဆိတ်တူကိုယ်တူများလိုက်နာသင့်သည်။) မိုဟာမက် မှဖြတ်ပြီး အလာအားမည်သည့် နေ၇ာထား၇မည်နည်းဟုမေး၇ာ အလာက ၄င်းမိုဟာမက်တံဆါကို အဒေါ်အားကျူးလွန်ထားသည် ဖြစ်၍ မြေပေါ်ချလျှင် ကမ္ဘာမီးလောင်မည်၊ေ၇ပေါ်ချလျှင် သမုဒ္ဒ၇ာေ၇ခန်းမည်ဆိုသောကြောင့် ခေါင်းပေါ်တင်ထားခိုင်း၇ာမှ ယနေ့မှုဆလင်များမိမိတို့ဖြတ်ပြီး လိင်တံဆါအစား လခွံဦးထုပ်ဆောင်းခြင်းဖြစ်သည်။( မှတ်ချက်။ ယောက်ျားတံ ဆါမဖြတ်သေးသူများ ဆောင်း၇န်မလိုဘဲဖြတ်ပြီးမှ ဆောင်းခွင့်၇ှိသည်။) ဤသည်တို့မှာ မှုဆလင်များ လခွံဦးထုပ်ဆောင်းပြီး အလာထံမိမိတို့ဤခွင့်မ လွှတ်နိုင်သောအပြစ် ( အမှန်စင်စစ် မိုဟာမက်ကျုးလွန်ခဲ့) ကိုဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းဖြစ်သည်။
မိုဟာမက်သည်မိမိပြုလုပ်ခဲ့သောအမှားကိုအမျိုးသမီးများအား၎င်းတို့ဧ။်ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွင်လုံခြုံမှုမ၇ှိသောကြောင့်ကျူးလွန်၇ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု စွတ်စွဲပြီးမျက်လုံး ၂ လုံးသာဖော်၇မည် ဆိုသောကြောင့် ယနေ့အစွန်းေ၇ာက် မှုဆလင်အမျိုးသားများက ၄င်းတို့ဧ။်ဇနီးသားသမီးများကို အတင်းဝတ်စားဆင် ယင်ခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်၇န်ကုန်မြို့တွင် ကြီးပြင်းသော မှုဆလင်မ တေ၇ာက်နိုင်ငံ၇ပ်၇ှားတွင် နအဖဆန်ကျင်ေ၇းဆန္ဒပြပွဲတွင် ဤကဲ့ဝတ်ဆင် သည်ကိုတွေ့ဘူးသည်။ သို့၇ာတွင်ဓါတ်ပုံလည်း ၇ိုက်ေ၇ာမျက်နှာဖုံးလှန်ပြီး ၇ိုက်ေ၇ာ၊ နိုင်ငံေ၇းခိုလှုံ၇ာတွင် တင်၇န်ဖြစ်ပုံ၇သည်။
ဤမှုဆလင် လခွံဦးထုပ်ဆောင်းအကြောင်း အပျော်အပျက်ေ၇းခြင်းမဟုတ်ဘဲ မှုဆလင်ေ၇းသော မှုဆလင်သမိုင်းသာဖြစ်သည်။ မိမိကြံဖန်ေ၇းသားခြင်းမ ဟုတ်ပါ။ ခေါတ်သစ် အချို့သော ကို၇မ်စာအုပ်များတွင် မှုပြုပြင်ချန်လှပ်၇န် ကြိုးစားလာကြသည်။ သို့၇ာတွင် မှုဆလင်အမျိုးသမီးများ မျက်လုံး၂ လုံးသာဖေါ်၍ ၀တ်ဆင်တိုင်း မိုဟာမက်ကအမျိုးသမီးများ ၀တ်စားဆင်ယင်မှု မလှုံခြုံ၍ အဒေါ်ကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟု စွတ်စွဲကာ ဤကဲ့သို့ဝတ်ဆင်၇န် ပညတ်ခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်ဟူသော သာဓက အမြဲ၇ှိသကဲ့သို့ မှုဆလင်အမျိုးသားများ လခွံဦးထုပ်ဆောင်းတိုင်း မိုဟာမက်အဒေါ်ကို ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဆောင်း၇ခြင်းဟူသောသာ ဓက၇ှိနေသ၍ ဖျောက်ဖျက်မ၇နိုင်ပါ။ မှုဆလင်ဝါဒချူပ်ငြိမ်းမှပျောက်ပျက်မည်။
အဒေါ်အား မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့သော အ၀ီစိဂျိုးကပ်နေသော မုဒိမ်းလူသတ်ကောင် ၀ါဒအကြမ်းဖက်လမ်းစဉ်သည် ယနေ့မြန်မာနှင့် ကမ္ဘာတွင် ပျောက်ကွယ်ပြီး လူ့လောကကြီး သာယာလှပ ငြိမ်းချမ်းသာယာေ၇းသည် မြန်မာနှင့် ကမ္ဘာ၇ှိ မှုဆလင်များတွင် အဓိကတာဝန်၇ှိပါ ကြောင်းတင်ပြ၇ပါသည်။
ယုတ်ညံ့သည့် မွတ်ဆလင်ကို လက်တွေ့ဆန့်ကျင်သည့်
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 1:30 AM
မင်းဘယ်လိုပဲ လုပ်ကြံ၊ ပုတ်ခတ်၊ပေါက်ကရဥပမာတွေ ပေးပြီး anti-islam လုပ်နေပေမယ့်
မင့်ရဲ့ အောက်တန်းကျတဲ့စိတ်ဓါတ် ကိုပိုပြီးပေါ်လွင်လာတာကလွဲပြီး အခြားဘာမှအကျိုးမရှိ
ဘူးကွ။မင်းဘယ်လောက်ပဲဆဲးဆဲး islam ကညစ်နွမ်းမသွားဘူး။သန်းရှင်းပြီးသား။မင်း က
ဘလော့တွေမှာ ကြိုက်သလောက်ရေး၊ ကြိုက်သလောက်ဆဲး အမှားနဲ့ အမှန်ဟာထင်ရှားပြီး
သားပါကွာ..။ခုမင်းရေးတာတွေ၊မင်းပြောတာတွေ ကို internet မှာတက်ပြီးဖတ်တဲ့သူတွေထဲက
ဘယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်းက ယုံသွားလည်းဆိုတာ စစ်တမ်းကောက်ကြည့်စမ်းပါဦး။ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်က
သူများပြောတိုင်းမယုံဖို့ ၊ကိုယ်တိုင်ဆန်းစစ်းပြီးမှယုံဖို့ဟောခဲ့တယ် မဟုတ်လား? ဒီနေ့့ကမ္ဘာ
ပေါ်မှာ ဒုတိယအများဆုံးသာသနာဝင်ရှိတဲ့ ဘာသာက မင်းစွပ်စွဲးသလောက် ယုတ်ညံနေတယ်
ဆိုရင်တော့…(ဒီလူရဲ့ပိုစ့်တွေကို ဖတ်မိသူများ ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်သုံးပြီးဆုံးဖြတ်ကြပါ။ခင်ဗျားတို့ 
ရဲ့ တွေးခေါ်မှု့ ကို ဒီလူရဲ့ ဦနှောက်မှာအဆုံးမခံစေပါနှင့်။)
ဟားဟား.. အစ်မသိမ့်သိမ့်အိရေ .. ကုလားကတော့ သူတောင်းစားဗျူဟာနဲ့ ငိုပြလို့လည်းမရ… ဟိုးတချိန်တုံးကလို အကြမ်းဖယ်မယ်လို့လဲ ချိမ်းချောက်လို့မရဆိုတော့.. ငပေါကြီးဖြစ်နေပြီ။ အခုတော့ နည်းလမ်းသစ်ကိုရှာတွေ့သွားပြီထင်တယ်။ ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတွေကို သုံးလာပြီ။ ဟိ.. ဟိ .. ဘာပြောရမှာလဲ.. ဟင်?
သူများဘာသာတွေကို ပုတ်ခက်ပြောဆိုတာဟာ ကို့ဘာ
တယ်။ အကြောင်းအကျိုးမစီလျှော်တဲ့ ရေးသားချက်
တွေနဲ့ ပြောပြရှင်းပြနေတာကတော့ ကလေးတယောက်
ကြည့်ပြီး ကိုမမိုက်မိအောင် ရှောင်ကျင်နိုင်စွမ်းတွေ
ကိုရသွားလို့ ပါ။ ဘယ်သူတရားပျက်ပျက် ကိုမပျက်